The Latest: Zimbabwe Arrests More than 600 for Fuel Protests | Newsmax.com
Wednesday, 16 January 2019 01:38 PM
HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on Zimbabwe protests (all times local):
He thanked security forces for "standing firm" to restore order and appeals to Zimbabweans to return to work.
Eight-two people have appeared in court in Zimbabwe's capital on charges of public violence amid a government crackdown on protests over dramatic fuel price increases.
Zimbabwe's president says he is deeply saddened by what he calls "wanton violence and cynical destruction" during days of protests over dramatic fuel price increases.
Armed police and soldiers are breaking up groups of more than five people in Zimbabwe's capital in a crackdown on protests over dramatic fuel price hikes.
The Latest on Zimbabwe protests (all times local):8:30 p.m.Zimbabwe's state security minister says more than 600 people have been arrested countrywide amid protests over dramatic fuel price increases.Owen Ncube said on state television that 214 of the people have already...